Ny fantsom-panafody dia ampiharina amin'ny lalamby maivana, fiara ambany rihana, lamasinina haingam-pandeha, lamasinina bala ary tram.
Fahaizan'ny vokatra -200pcs / taona, manokana ho an'ny mpanjifa, famolavolana ary fanampiana hampivoatra ny mpanjifa, nomenay ho an'ny Merak-Jin xin Air-Conditioning Systems (Wuxi) Co., Ltd;
Tombon'ny vokatra: lanja maivana, toerana kely, firafitra tsotra sy mirindra, androm-piainana maharitra, 30 taona farafahakeliny
Masinina sarimihetsika tariby orina KN95 namboarina, nohavaozina ary notapahina tsirairay, farantsa 100 isa-minitra.
Ny kabine mitaingina (DFBK) dia ampiharina amin'ny lalamby kely, fiara ambany, fiaran-dalamby haingam-pandeha, lamasinina bala ary tram. Fahafahana -500pcs / taona, manokana ho an'ny mpanjifa. Nanome ho an'ny Fuji, làlambe, skoda (any Shina) izahay.
Mora ampiasaina, tsy misy olana amin'ny fanadiovana, tsy misy olana amin'ny fitehirizana vovo-kafe, famokarana kafe azo antoka kokoa (Ny novice koa dia mety hahatonga kafe tonga lafatra), fotoana fiandrasana fohy kokoa, ny vidiny tsara indrindra